Misoro Yenhau Dzedu Dzanhasi Chitatu, Chikunguru 12, 2017
Vechidiki veMDC-T vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kuti mitemo inobata sarudzo ivandudzwe uye ZEC ishande yakazvimirira.
Rimwe sangano renyanzvi mune zvematongerwo enyika rekuAmerica, re Council on Foreign Relations, rinoti Zimbabwe inogona kupinda mumhirizhonga pamberi pesarudzo dza 2018 kana nyaya yekuti ndiani achatungamira nyika ndiani kana mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vabva pachigaro.
Gavhuna veRBZ, Dr. John Mangudya vanoti kushandiswa kwemari yekuSouth Africa yeRand handiko kunopedza dambudziko remari munyika, sezvo hupfumi hwenyika huri kutatarika.
Dare repamusorosoro reConstitutional Court rinoramba kunzwa nyaya yamuzvina bhizimisi vekwaMutare, Va Tendai Blessing Mangwiro, yekuti ritsinhire mutongo weHigh Court wekuti gurukota rezvemukati menyika VaIgnatius Chombo vanofanira kudzorera muzvinabhizimisi uyu $1.5 million yaakatorerwa nemapurisa muna 2012.
Vamwe vanhu vanogara kunze kweguta reBulawayo nhasi vaongororwa ropa ravo kuti rine hutachiwana hweHIV here kana kuti kwete, pamwe nekuongorwa shuga, maziso nezvimwe pachena pasi pechirongwa cheNational Aids Council.
Muchirongwa che LiveTalk-Diaspora Forum na8pm nhasi tiri kutarisa nezvekuratidzira kunogara kuchiitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri ku U.K pasi peZimVigil.
Muimbi wekuSouth Africa ane mukurumbira zvikuru Ray Phiri uyo aiimba musambo weJazz anoshaya.